TV ndị nwere ihe karịrị sentimita iri ise, olee nke ị ga-ahọrọ? | Akụkọ akụrụngwa
TV ndị nwere ihe karịrị sentimita iri ise, olee nke ị ga-ahọrọ?
You na-eche echiche idozigharị telivishọn ụlọ gị wee nye ngwaọrụ ochie gị akwụkwọ ikike ngafe? Youtụlela ọtụtụ broshuọ na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị ma ị maghị ụdị nke ịhọrọ? Have nwere ime ụlọ ụlọ buru ibu buru ibu nke na ndị Brady nwere ike ibi na ya? Ya mere ihe ị chọrọ bụ telivishọn nke ọ dịkarịa ala sentimita iri ise, otu n'ime ndị ihe oyiyi ahụ dị ka ọ ga-adakwasị gị na nke ị ga-eji na-anụ ụtọ ihe nkiri gị na usoro gị karịa ka ọ dị.
Ọ dabara nke ọma, taa, ọkọnọ telivishọn ndị dị gburugburu sentimita iri ise Ihuenyo, na ndị ọzọ, bụ n'ezie iche iche, yabụ inwere ike inyocha ọnụọgụ dị mma nke akara, ụdị, ọnụahịa ọmụmụ, njirimara na ihe ndị ọzọ. Akụkụ na-ezighi ezi nke onyinye dị otú ahụ bụ na anyị nwere ike ịla ara na-agba mbọ ma kwụsị icheta njirimara nke otu ma ọ bụ ụdị ọzọ. Ya mere, taa na Akụkọ akụrụngwa anyi choro inye gi aka ma mee ka nyocha gi di nfe site n’itinye otu Ntụle TV 50 sentimita asatọ ma ọ bụ karịa nke ị nwere ike idobe. Nwere ike soro anyị?
Ka anyị bido nhọrọ anyị na nke a Samsung UE50KU6000, ihe ịtụnanya TV na Ihuenyo 50-inch 4K UHD, ihe na-agụnye ike ọkà okwu, abụọ USB 2.0 ọdụ ụgbọ mmiri otú i nwere ike jikọọ a pendrive ma ọ bụ ihe mpụga ike mbanye jupụtara na fim na usoro, na Njikọta Ethernet, ọrụ ndekọ oge, 3 HDMI ọdụ ụgbọ mmiri iji jikọọ ngwaọrụ ndị ọzọ dịka ihe ọkpụkpọ BluRay, Apple TV ma ọ bụ Chromecast n'etiti ndị ọzọ, smart TV na Tizen sistemụ, A ike mba, dakọtara na VESA arịọnụ usoro otú i nwere ike mfe kpọgidere ya na mgbidi na ọtụtụ ndị ọzọ.
Isi uru ya gụnyere nke ukwuu ezi oyiyi mma na-enweghị ntụgharị uche na otu ezigbo ikiri ikiri, otú ị ga-enweghị ka ikpo isi gị na-eme mgbanwe; nwekwara a ezi ụda dị mma, ọnụ ọgụgụ dị mma nke njikọta dị ka anyị siri hụ, ọ dịkwa dị mfe iji. Ihe a niile n’echefughi ihe Igwe TV jikọtara ọnụ ekele nke ị nwere ike igwu egwuregwu ndị na-anaghị adị arọ, sọfụ ịntanetị ma nwee ọtụtụ ngwa dịka YouTube, Netflix, wdg.
Anyị na-eme ka itu ukwu ahụ gaa na ọzọ n'ime ụdị teknụzụ kachasị ama na ama ama na ama ama Panasonic VIERA TX-50DX780E con 50 anụ ọhịa ahụ na diagonal Ọdịdị Ultra HD (3840 x 2160 pikselụ) yana 3D na Smart TV agwakọtara.
Nke a telivishọn Panasonic VIERA TX-50DX780E nwere ọmarịcha mma n'etiti onye isi atụmatụ anyị nwere ike ịkọwa ịdị adị nke abụọ okwu agbakọ, njikọta Bluetooth, mmepụta ihe dijitalụ, abụọ USB 2.0 ọdụ ụgbọ mmiri na otu USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, asambodo ike A, njikọta Ethernet, VESA ugwu usoro ndakọrịta, dị iche iche ụda ụdịdị, dị iche iche smart picture ụdịdị, atọ HDMI ọdụ ụgbọ mmiri, smart TV ya na sistemụ Firefox OS, WiFi, wdg.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ nnọọ zuru ezu nke 50-anụ ọhịa telivishọn n'etiti onye isi uru anyị nwere ike igosipụta ezigbo ụda dị mma, ịdị mfe nke ojiji, ike oriri dị ala, ọtụtụ na njikọta njikọta dịgasị iche na oghere ikiri sara mbara.
Anyị na otu ika ahụ na-anọ, Panasonic, mana ụdị dị iche (kpachara anya n'ihi nomenclature dị iche na nke gara aga na naanị otu leta). Ọ bụ maka nke a Panasonic TX-50EX780E, a telivishọn na 50 inch UHD ihuenyo (3840 x 2160 pikselụ) Ihe ngosi 4K HDR nke ị nwere ike ịnụ ụtọ ahụmịhe sinima dị adị, mana ịhapụ ịhapụ ụlọ obibi ahụ.
TV a magburu onwe ya nwere njirimara kachasị elu dịka abụọ USB 2.0 ọdụ ụgbọ mmiri na otu USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri, mmepụta dijitalụ, ụda isi okwu, anọ HDMI ọdụ ụgbọ mmiri, nhọrọ nke ndekọ na diski ike ma ọ bụ pendrive, njikọta Bluetooth yabụ ị nwere ike ijikọ kiiboodu na òké, asambodo ike A, ndakọrịta na usoro VESA, ndị ọkà okwu agbakwunyere abụọ nwere 10W nke ike ọ bụla, Smart TV "My Home Screen 2.0" na ịnweta Netflix na ngwa ndị ọzọ, na ndị ọzọ. N’agaghị echezọ a tilt ma bulie imewe ike imeghari na gburugburu na gburugburu,
N'ime uru ndị bụ isi, dị ka ihe atụ gara aga, anyị nwere ike ịkọwapụta na ọ dị mfe iji, na-eri obere ume, na-enye ezi oyiyi mma na-enweghị echiche na mbara ikuku ikiri, na nhọrọ njikọta dị obosara n'ezie. N’agaghị echezọ a tilt ma bulie imewe ike imeghari na gburugburu na gburugburu.
Anyị ga-ewere obere itu ukwu na nha ka anyị gbanwere ụdị ikwu maka TV a LG 55EC930V nke ahụ na-enye ahụmịhe ọdịyo na vidiyo na-enweghị atụ.
Dị ka ị pụrụ ịhụ n’ihe osise dị n’elu, anyị nọ n’ihu a ihu ihu ya na nha ihuenyo nke 55 nke anụ ọhịa ahụ Full HD (1920 x 1080), dịtụ elu karịa ụdị anyị ahụgoro ugbu a, teknụzụ teknụzụ OLED ekele nke ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ na ndò ndị akọwapụtara karị, ndị ojii dị ọcha na ọtụtụ agba na agba miri emi karị, yana Teknụzụ 3d.
Ma ọ bụ anyị nwere ike ichefu ya mara imewe, oké ebughibu, yana Nsonye nke Ọrụ Smart TV na webOS sistemụ nke ga - enyere gị aka sọfụ ịntanetị ma nwee ọtụtụ ngwa na TV gị dịka Netflix, Wuaki TV, YouTube na ọtụtụ ndị ọzọ.
Akụkụ ndị ọzọ dị ịrịba ama bụ ịdị adị nke anọ HDMI ọdụ ụgbọ mmiri, atọ USB 2.0 njikọ, Ntinye AV, ọrụ ndekọ na pendrive ma ọ bụ diski diski mpụga, ohere nke ijikọ keyboard na òké, njikọ Wi-Fi, ndị ọkà okwu agbakwunyere abụọ nke 10W nke ike ọ bụla, wdg.
Ya mere, isi uru ya bu nnukwu oyiyi mma nke teknụzụ OLED gbakwunyere a ahụmịhe ka ukwuu featuring curved ihuenyo imewe na ọtụtụ na njikọta nhọrọ dịgasị iche.
Site na South Korea anyị na-aga obodo nke ọwụwa anyanwụ na otu n'ime ụdị ndị ama ama n'oge niile, ma na onyogho na ụda, telephony na n'ezie, egwuregwu vidio. Echere m Sony na TV a Sony KD-49X8308C nke anyị nwere ike ịnụ ụtọ ọdịnaya anyị kachasị amasị anyị dịka anyị echetụbeghị n'ekele ya 50-anụ ọhịa Ultra HD 4K LCD ihuenyo (3.840 x 2.160) nke na - ejikọ teknụzụ IPS nke na - enye anyị ụdị mma ọhụụ agba agba na ncha, ọbụlagodi na onyoghi anya na / ma obu onyogho na - agagharị, jikọtara ọnụ maka teknụzụ Motionflow.
Anyị enweghị ike ịhapụ ihe mara mma mara mma imewe, na ezigbo mma mechaa dị ka Sony. Ọzọkwa, ịbụ dakọtara na VESA arịọnụ usoro, anyị nwere ike idowe televishọn anyị n’elu mgbidi wee nwee ọmarịcha ahụ egwu sinima.
Na usoro nke ụda, ọ nwere ike okwu bass Reflex na-enye a ezi ụda dị mma. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ ngwaọrụ ndị ọzọ, ị gaghị enwe nsogbu ọ bụla n'ihi na Sony KD-49X8308C nwere atọ ọdụ ụgbọ USB y anọ HDMI ọdụ ụgbọ mmiri.
Anyị ahụworị nnukwu nhọrọ ise mana anyị ka nwere ihe ọzọ anyị ga-ahụ. Na nke a anyị na-akwụsị iji nyochaa nke a Philips 50PUH6400 telivishọn, a ngwaọrụ na integrated Smart TV na a na-akpachapụ anya, mara mma ma mara mma imewe, na a ụkwụ na dabara n'ụzọ zuru oke na-ebelata imewe nke ya okpokolo agba, na nke na-dakọtara na usoro ntinye VESA, yabụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ usoro kachasị amasị anyị ma ọ bụ egwuregwu ahụ echere ogologo oge.
Philips 50PUH6400 Smart TV nwere a 50 ″ 4K Ultra HD Ikanam ngosi nke ahụ na-enye ogo onyonyo pụrụ iche nke etinyere na teknụzụ Micro Dimming Pro, ekele nke anyị nwere ike ịhazi ọdịiche nke ihuenyo dabere na ọnụọgụ ọkụ dị na ime ụlọ anyị ma ọ bụ ime ụlọ anyị, na Ebugharị ebumpụta ụwa, nke na-eme ka nkọ na mmiri dịwanye elu ka anyị wee nwee ike ịhụ ihe oyiyi na-akpụ akpụ n'emeghị ihe ọ bụla. Ma ọ bụrụ na ihe a niile dị gị ka obere, teknụzụ Pixel Plus Ultra HD na-enye ọtụtụ ihe doro anya ma na-ufiop agba.
Na mgbakwunye na nke a ikenyeneke mbiet picture àgwà, TV atụmatụ atọ ọdụ ụgbọ USB y anọ HDMI ọdụ ụgbọ mmiri nke mere na anyị nwere ike ijikọ iche iche iche iche nke ngwaọrụ; nwekwara WiFi Njikọta, 8GB nke nchekwa maka ngwa, android TV dị ka Smart TV sistemụ na ọtụtụ ndị ọzọ. Ewoo! Ma ọ bụ ike gbaara A, n'ihi ya, ọ bụ ọrụ na gburugburu ebe obibi na-agaghị enye gị mmenyenjo na ọkụ eletrik ụgwọ.
Anyị na-ejedebe otu South Korea nke anyị bidoro yana Samsung UE49KS7000 TV a 49 anụ ọhịa ahụ (nke ọma, ntakịrị ihe karịa ihe anyị hụworo ugbu a, mana ọ bụghị ajụjụ banyere ịlụ ọgụ ma haha) Ultra HD 4K HDR LCD na ncha ihu ọkụ nke nwere ọdụ ụgbọ mmiri HDMI anọ na ọtụtụ njikọ ndị ọzọ, yana atụmatụ SmartTV.
Ma ikekwe isi ihe dị na TV a bụ na ọ na-enye a ikenyeneke mbiet ndise na ụda oluma ọ bụ, dị nnọọ yiri na ọbụna mgbe ụfọdụ ka mma karịa ụdị ndị ọzọ sitere na ụdị ndị ọzọ mana anyị nwere ike ịchọta ya na ọnụahịa ka mma.
N'ezie, dịka anyị gosipụtara na mbido, ndepụta a bụ naanị ntinye na ụfọdụ igwe onyonyo kachasị mma nke 50 ″ ma ọ bụ karịa nke anyị nwere ike ịchọta n'ahịa dị ugbu a. Anyị nwekwara ike nyekwa ihe atụ ndị ọzọ dịka Panasonic TX-50CX700, Samsung UE55JU6400 na ọtụtụ ndị ọzọ. Kedu ihe ị chọrọ? Rụzigharịrị telivishọn gị na nso nso a n'ụlọ? You kpebielarị ụdị nke ị ga-eme? Gwa anyị maka ya ma anyị ga - enyere ndị na - agụ akwụkwọ ndị ọzọ aka na - achọ ma na - achọta televishọn ha kachasị mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Foto na ụda » TV » TV ndị nwere ihe karịrị sentimita iri ise, olee nke ị ga-ahọrọ?
International Spy Museum dị na Washington DC na-ebute obi mgbawa nye ndị ọbịa ya
Microsoft Andromeda, ụlọ ọrụ ahụ ga-arụ ọrụ na akwụkwọ ndetu dijitalụ